Ye latt's Page - Myanmar in Singapore
MaleNaypyitawMyanmar Like5members like this
Share Blog Posts (1341)Discussions (2)Events in SingaporeGroups (1)PhotosPhoto Albums Ye latt's Likes Ye latt's Friends
View All Ye latt's Groups
Myanmar Bookshelf (စာအုပ…
From Hay Mar Win
Ye latt's Page
Ye latt postedablog postသိမ်ဖြူဆရာတော်-အခြေပြုဆေးအဘိဓာန်See MoreJan 11 0
khin hnin aye commented on Ye latt's blog post မှားနေသောနိယာမတစ်ခု"မိုက်တယ်"Jun 26, 2015Ye latt liked Ye latt's profileOct 19, 2014nothing to display liked Ye latt's blog post စာငတ်နေသူများအတွက်(ကြိုက်သလိုဖတ်ပါ)May 31, 2014u myat thu liked Ye latt's blog post The Best English4YouMay 21, 2014Ye latt posted blog postsသင်၏မွေးနေ့ကိုစီစစ်ခြင်းစာငတ်နေသူများအတွက်(ကြိုက်သလိုဖတ်ပါ)ကြိုက်ရာရှာလို့ရတဲ့မြန်မာမှတ်စုစာအုပ်13 more…May 17, 2014Ye latt posted blog postsပိဋက သုံးပုံစာအုပ်များနှင့် လယ်တီ ဒီပနီကျမ်းများ စုစည်းတင်ဆက်မှု....Facebook ကို ပရိုတစ်ယောက်လို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်း သုံးတတ်လိုလျှင် ဒီစာအုပ်ဖတ်ပါစာအုပ်မျိုးစုံ ရချင်သူ၊ဖတ်ခြင်သူများအတွက်2 more…May 14, 2014Ye latt postedablog postသားသမီးများအကြောင်းလူ့ဘဝဇာတ်ခုံကြီးမှာ လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ သားသမီးဇာတ်ဆောင်ဘဝကို ဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးကြပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဟာ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ တရားဥပဒေ (မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေ) နဲ့ သက်ဆိုင်တယ်။ ဥပဒေမှာပါတဲ့ သားသမီးများရဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ တာဝန်ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို တင်ပြပါမယ်။ သားသမီးအမျိုးမျိုးကင်းဝန်မင်းကြီး ဦးကောင်းရေးတဲ့ ဓမ္မသတ်နဲ့ မနုကျယ်ဓမ္မသတ်တို့မှာ မိဘအမွေ ဆက်ခံထိုက်တဲ့ သားသမီး (၆) မျိုး၊ အမွေမခံထိုက်တဲ့ သားသမီး (၆)မျိုး ဖော်ပြထားတယ်။မိဘအမွေဆက်ခံထိုက်တဲ့သားသမီး (၆)မျိုး၁။ သြရသ (ရင်၌ဖြစ်သော သားသမီး)၂။ ကိတ္ထိမ…See MoreApr 23, 2014 0
Ye latt posted blog postsဘ၀သံသရာကြွက်သားချို၏၊ လူသားခါး၏မှားနေသောနိယာမတစ်ခုApr 20, 2014Ye latt is now friends with beyondrose2010 and Thuzar HlaingApr 20, 2014aye aye than liked Ye latt's blog post မှားနေသောနိယာမတစ်ခုMar 6, 2014Thuzar Hlaing liked Ye latt's blog post အိုဘယ့်ခေါင်းဆောင်Feb 27, 2014moemyinthein commented on Ye latt's blog post Viber ကိုသုံးပြီး ဖုန်း free ခေါ်ဆိုမယ် ၊ message free ပို့မယ်"ဆော.ဝဲကိုကြိုက်တယ် လင်.မ၇ှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒေါင်းလို.မရဘူး
"Dec 15, 2013moemyinthein commented on Ye latt's blog post Viber ကိုသုံးပြီး ဖုန်း free ခေါ်ဆိုမယ် ၊ message free ပို့မယ်"ဘယ်လင်.ကနေဒေါင်းရမလဲဗျာ"Dec 15, 2013moemyinthein liked Ye latt's blog post Viber ကိုသုံးပြီး ဖုန်း free ခေါ်ဆိုမယ် ၊ message free ပို့မယ်Dec 15, 2013Htet Naing Aung liked Ye latt's blog post Apple Computer နှင့် Pixar Animation Studio တို့ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူ Steve Jobs ပြောကြားခဲ့ သည့် မိန့်ခွန်းDec 11, 2013 More... RSS
to become Author
Ye latt's Blog
Posted on January 11, 2016 at 4:20pm0Comments
Posted on May 17, 2014 at 7:15pm0Comments
Posted on May 17, 2014 at 7:09pm0Comments
Posted on May 17, 2014 at 6:58pm0Comments
https://sites.google.com/site/myanmarsite1/home AddaBlog Post
At 3:58pm on September 30, 2013, beyondrose2010 said… မင်္ဂလာပါ
At 10:01am on January 7, 2013, snow said… i got too much knowledge to visit your page.. want to visit again At 3:05pm on July 29, 2012, naturelover said… လာလည်သွားပါတယ်....ပျော်ရွှင်ပါစေ....
At 3:26pm on June 25, 2012, ♥**ေ*န*လ*င်း*♠•••☺ said… အယုအယတင်မဟုတ်ဘူး အထိအတွေ့လေးလည်း ပါခြင်တာပေါ့ ....
မှတ်ချက် ( ချိုသော နှုတ်ခမ်း .. သာယာသောစကား ၀င်းဝါတောက်ပတဲ့ သူ့မျက်နှာ.. နဖူးက အစ အခြေမ အဆုံး .... တစ်ပြုံးပြုံးကြီး ထိုင်ကြည့်ခြင်တယ်.... ဟဲ ဟဲ At 9:05pm on June 14, 2012, Aung Myo Myint said… အကောင်းဆုံးသတင်းတွေပေးပို့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။နောက်လည်းပို့ပေးပါအုန်း .,.thank you..နော်! At 12:19pm on May 8, 2012, ♥**ေ*န*လ*င်း*♠•••☺ said… ကဗျာလေး ဖတ်ဖို့ ထားခဲ့ပါတယ်.. ထပ်မံ လည်လည်လာသွားပါတယ်ခင်ဗျာ...
ကောင်းသော နေ့တွေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ..
naylin At 5:58pm on May 6, 2012, ♥**ေ*န*လ*င်း*♠•••☺ said… လည်လည် လာခဲ့ပါသည်...
ခင်မင်လို့ ရမလား ဗျ At 11:45am on April 28, 2012, Hay Mar Win gave Ye lattagift…Pink RibbonPink RibbonFrom the Gift Store At 10:04am on December 13, 2011, moe pwint said… Morning! At 1:50pm on December 11, 2011, မနတ်သမီး said… No comments yet!